ကန်ထရိုက်ယူလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကန်ထရိုက်ယူလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးပါ…
Posted by ေၾကာင္၀တုတ္ on Apr 3, 2013 in Creative Writing, Think Different | 26 comments
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကန်ထရိုက်စနစ်တွေအတော်ခေတ်စားပါသတဲ့…
လမ်းတံတားအသုံးပြုခတို့၊ ဈေးတွင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အများသုံးသန့်စင်ခန်း စသည်စသည်တွေမှာ ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့
ယုတ်စွအဆုံး… ရွှေတိဂုံဘုရားကအလှူငွေတွေကိုတောင် ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ပေးကြပါတယ်…
အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကန်ထရိုက်စနစ်တွေခေတ်စားသပေါ့…
ဥပမာ… လမ်းမိုင် (၁၀၀)ရှိသောလမ်းအပိုင်းကို… အစိုးရက လမ်းခင်းရင် သိန်း (၁၀၀၀)ကျမယ်ဆိုပါစို့…
ပြီးတော့ လမ်းတံတားအသုံးပြုခကို နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ကောက်ခံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့…
နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီကစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ကုန်ကျငွေအရင်းကျေရုံမကဘဲ… အမြတ်ထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုရရှိနိုင်ပါတယ်…
ဈေးအတွင်းတယ်လီဖုန်းလိုင်းများ… အများသုံးသန့်စင်ခန်းများလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ…
ဘုရားတစ်ခုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့… တနည်းအားဖြင့် ဂေါကပအဖွဲ့က တစ်နှစ်ဘုရားမှရရှိသောအလှူငွေ…
အဲဒီလို ကန်ထရိုက်ရယူခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ် လေလံစနစ်ကိုအသုံးပြုတယ်လို့လဲသိကြပါတယ်…
အခုကတော့ တကယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို စပြောပါ့မယ်…
ကျွန်တော်လဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဌာနတစ်ခုကို ကန်ထရိုက်ယူချင်ပါတယ်…
မီးပွိုင့်တွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်… ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် မီးပွိုင့်တွေ လမ်းစုံလမ်းဂွတိုင်းမှာ တပ်ပေးမယ်…
မီးပွိုင့်အားလုံးကို အော်တိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်နဲ့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ လမ်းစနစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်…
မီးပွိုင့်တိုင်းမှာ CCTV Camera တွေတပ်ထားမယ်… ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်မယ်…
မော်တော်ပီကယ်လို့ခေါ်တဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးရဲဝန်ထမ်းတွေကို လုံလောက်တဲ့လစာတိုးပေးမယ်…
သူတို့တွေအတွက်… သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေ… စက်သုံးဆီတွေကိုလုံလောက်အောင်ထုတ်ပေးမယ်…
လမ်းဖြတ်ကူးသူများအတွက်… လမ်းဖြတ်ကူးဖို့မီးပွိုင့်တွေ… လူကူးမျဉ်းကြားတွေ… စနစ်တကျလုပ်ပေးမယ်…
ဒါက လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူလူထုနဲ့ ကောင်းဖို့လုပ်ပေးတာ…
သူတို့ဘက်ချည်းလုပ်ပေးလို့မဖြစ်ပါဘူး… ကျွန်တော်ကလဲ ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့သူဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ အမြတ်ထွက်အောင်လုပ်ရပါ့မယ်…
သင်တန်းမှာ အရည်အချင်းမပြည့်မီတဲ့သူတွေကို… အလုပ်ဖြုတ်ပါ့မယ်… ယာဉ်ထိန်းရဲရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားကို
မီးနီဖြတ်မောင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၅)သိန်း (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၅)နှစ်
လမ်းပြောင်းပြန်မောင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၅)သိန်း (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၅)နှစ်
မဆင်မခြင်မောင်းနှင်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်… ဒဏ်ငွေ သိန်း(၅၀) နှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် (၁၀)…
ကွေ့ခွင့်မရှိသောနေရာတွင် ဂငယ်ကွေ့ကွေ့ခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ကားရပ်… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
Yellow Box အတွင်းကားရပ်… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
အတွင်းဆုံးအဝိုင်းမှ လမ်းကွေ့ကြောပြောင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ရမ်းကားစွာကားမောင်းခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့စွာမောင်းခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း….(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မပါဘဲ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း….(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ဆိုင်ကယ်အား နှစ်ဦးထက်ပိုမိုစီးနင်းခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း….(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ဆိုင်ကယ်နှင့်မမျှသောဝန်ပိုတင်ဆောင်မှု… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း….(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
လူကူးမျဉ်းကြားမှလမ်းမကူးခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၅)သိန်း(သို့) ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်
မီးစိမ်းနေစဉ် လမ်းဖြတ်ကူးခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၅)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်
အနှေးယာဉ်များ လမ်းပြောင်းပြန်စီးခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း…(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
ရောင်ပြန်ပြား၊ မီးမပါဘဲစီးနင်းခြင်း… ဒဏ်ငွေ (၁၀)သိန်း..(သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်
လိုင်းကားထံမှလိုင်းကြေးယူသော ယာဉ်ထိန်းရဲ.. ဒဏ်ငွေ (၁၅)သိန်း… (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၅)နှစ်
ကားပိတ်ချိန်တွင် ရုံထဲတွင်ထိုင်နေသော ယာဉ်ထိန်းရဲ… ဒဏ်ငွေ (၁၅)သိန်း… (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၅)နှစ်
မျက်စိရှေ့မှောက်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေ့ရှိလျက် အရေးမယူသော ယာဉ်ထိန်းရဲ… ဒဏ်ငွေ (၁၅)သိန်း… (သို့) ထောင်ဒဏ် (၁၅)နှစ်
ကျွန်တော့ကို လမ်းစည်းကမ်းကိုင်တွယ်ခွင့်ပေးမယ်… စိတ်တိုင်းကျစီမံခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်…
မီးပွိုင်တွေနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လမ်းတွေဖြစ်ဖို့… စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်…
အစိုးရနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီး… နှစ်နှစ်လောက်… ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်း၊ မီးပွိုင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို…
ကျွန်တော့ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ရှယ်ယာတွေထည့်ဝင်ချင်လားဗျာ…
Credit :All Fotos from Internet
အကြံဇိုး၊ ဉာဏ်ဇိုးကြီး (အဲ) အကြံကောင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းတွေ သိပ်ထွက်တာပဲ။
ထလန်စပွတ်တေးရှင်း အင်ဂျင်နီးရားရင်း ဘွတ် လေးပြန်ဖတ်ပြီးမှ ပြန်လာ မန့်မယ်နော် ကိုဂျီးဖက်။
ခုကတော့ မန့်တစ်ခုဖိုး အရင်လာယူတာ။
ရန်ကုန်မှာ တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း ပြသနာကို လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းတစ်ခုပဲ တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ရင် တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်
အဲဒီ ကုမ္ပဏီကို စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းလို့ ရတဲ့ စနစ်တစ်ခု ရှိရင် လုပ်ငန်းစလို့ ရ ပြီ
မျဉ်းကြား က လမ်းမကူးတာတောင် ၅သိန်း တဲ့
တော်ပီ အခုလုပ်တဲ့အလုပ်ကထွက်ပီး မော်တော်ပီကယ်ပဲ လုပ်တော့မယ်….
ကိုယ်ဖမ်းလို. အဖမ်းခံရတဲ့သူနဲ. ညှိရင် ၇၅ သိန်းလောက်နဲ. ပွဲပီးဒယ်….ဟိဟိဟိ
တရက် ၅ယောက်လောက်ပဲ ဖမ်းအုံး…. တပတ်အတွင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားစီးနိုင်ပီ……..ဟေဟေဟေ့
စစ်တပ်ကို ကန်ထရိုက်လုပ်လိုက်ရင်..ပိုမထော..အဲ..အဲ.. ပိုမကောင်းဘူးလား…။
ယူအက်စ်က.. အီရတ်သိမ်းတော့..Blackwater ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကို.. လုံခြုံရေးအတွက် ကန်ထရိုက်ပေးငှားဖူးတယ်..
အလုပ်မရှိတဲ့.. မြန်မာပြည်က.. တပ်မတော်သားတွေကို.. ယူအက်စ်ကကန်ထရိုက်ပေးငှား..စစ်တိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်.. မြန်မာပြည်လည်း.. ဘီလီယန်ချီဝင်ငွေရ.. တာလီဘန်လိုအစွန်းရောက်တွေလည်းမျိုးပြုတ်သွားမယ်.. တွေးဖူးသေး…
ရဲလိုအခြေခံဥပဒေ..ဥပဒေထိန်းစောင့်ရသူတွေကို.. ကန်ထရိုက်ပေးပစ်တာ.. အခြေခံဥပဒေအရ.. မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. ယူအက်စ်-အယ်လ်အေမှာ.. မီးပွိုင့်တွေမှကင်မရာတပ်ပြီးကားဖမ်း-ဒဏ်ချတဲ့အလုပ်.. ကန်ထရိုက်ယူလုပ်တာ.. လူတွေကဒဏ်ငွေလာမဆောင်ပဲပို့တဲ့ချလံ အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ကြလို့.. ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်တဲ့.. မြို့တော်မြူနီစပယ်ရုံး.. ဒေဝါလီဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလည်း…ရှိပါကြောင်း..။
အခြေခံဥပဒေအရ.. လူတယောက်က.. လူတယောက်ကို.. ဥပဒေမလိုက်နာလို့ဆိုပြီး.. ဒဏ်ချဆုံးမခွင့်မရှိပါကြောင်း..။ လူသားချင်း.. သမ္မတအပါအဝင်..တန်းတူပေါ်အခြေခံပါကြောင်း…။
ဖက်ဖက်ကက်ရဲ့.. ဒီလိုရေးတဲ့အတွေးကို.. အံ့ဩကြိုဆိုပါကြောင်း.. :harr:
ဒီက စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးက ဟိုလိုလည်း လုပ်သေးတယ်.။
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပတ္တရောင်လှည့်ပြီး ………
– ကားပါကင်က ကူပွန်မဖောက်တဲ့ လူတွေ၊
– မရပ်ရနေရာမှာ ရပ်တဲ့လူတွေ၊
– Loading/Unloading Bay လိုမျိုးမှာ အကြာကြီးရပ်တဲ့လူတွေ (ကားစက်ကို စမ်းတာဗျ၊)
– ဘတ်(စ) ကားဂိတ်မှာ ရပ်တဲ့ တက္ကစီတွေ
– ဘတ်(စ) ကားလမ်းပေါ် ပိတ်မောင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ၊
အဲဒါတွေကို စက်ကလေးနဲ့ ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခါတည်းထုတ်ပြီး ဒဏ်ငွေ သွားဆောင်ခိုင်းတာပဲ။
နောက် ညနက်ပိုင်း မောင်းတဲ့ ကားသမားတွေကို ရပ်ခိုင်းပြီး အယ်လကိုဟော တက်(စ)တာလေးတွေနဲ့ စမ်းတယ်။
သတ်မှတ်လစ်မစ်ကျော်ရင် သူတို့က ကားသိမ်းသွားပြီး နောက်ရက်မှ ပြန်လာယူခိုင်းတယ်။
အဲလာဆို ကျုပ် ကိုဂျီးဖက် အရင်ဆုံး ထိနိုင်လားဟင်??
အကြံကုန်လို့ ဂဠုန်ဆားချက်နေပြီ… :harr:
မနေ ့တနေ ့ကမှ ကားဝယ်ထားလို့ပျော်ပီးမြို ့ထဲပတ်မောင်းတာ…
ဝယ်ထားတဲ့ ကားအသစ်စက်စက်က သိန်း ၁၅ဝ လောက်….
ကျသွားတဲ့ ဒဏ်ငွေက သိန်း ၈ဝ ဆို ဟုတ်ပေ့……..
ဖက်ကက်ရေ… အကြံလေးတော့ ကောင်းပါရဲ့…..
( ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဌာနကတော့… .ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးပါ…) ဆိုတော့ ဒီပိုစ့်နဲ့ ဒီပိုစ့်ပါ ဒါဏ်ကြေးစနစ်နဲ့ ပြစ်ဒါဏ်တွေဖတ်ခဲ့ပြီး သကာလ ကိုကြောင်ဝတုတ် ကို အကြံတစ်ခုပေးချင်လို့ပါ။
အဲဒီကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလက်မခံမှီ ထောင်ဦးစီးမှုး( ထောင်ပိုင်ခေါ်လားမသိ) တွေနဲ့ အရင်ဆွေးနွေးရ လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ထောင်အကာရံများ ထပ်ချဲ့ပေးမှာလားလို့လေ………….။
ဗဟိုထိန်းချုပ်တဲ့ Network စနစ် ရယ်
Online Banking ရယ်
ကားတစီးချင်စီမှာတပ်ထားရမယ့် ETC Card ရယ်
နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်တဲ့အနာဂါတ်မှာတော့ လုပ်လို့ရလာမယ်ထင်တာပါပဲ…
ငွေအပေါင်စနစ်တခုထား .. ကားတွေကို ဘဏ် လက်ကျန် ဘယ်လောက်မရှိရင် လမ်းပေါ်တက်ခွင့်
မပေးနဲ့ ဆိုတာမျိုးပေါ့…။ ကျူးလွန်ရင် ကျူးလွန်တဲ့ နေရာတင် ဆင်ဆာနဲ့ ကားအိုင်ဒီ ယာဉ်မောင်း
အိုင်ဒီဖတ်ပြီး တခါတည်း အွန်လိုင်းက ဒဏ်ငွေက စည်ပင်အကောင့်ထဲ ထရန်စဖာ ဖြစ်အောင်လုပ်.
မမှားဘဲ ဖမ်းလို့မရအောင် မှားတာကို လူ-လူ(ယာဉ်မောင်း-ယာဉ်ထိန်း)ချင်း ညှိပြီး ကတ်ရှ် ငွေယူပီး
လွှတ်မပေးနိုင်အောင် ဗဟို နတ်ဝါ့ခ်ကနေ မော်နီတာထိုင်လုပ်နေ…။ အိုက်လို ..အိုက်လို …
လွန်ခဲ့တဲ့တလက.. ဖရီးဝေးသွားရင်း ရှယ်လိုင်း(Toll lane) ထဲဖြတ်ဆိုဝင်သွားတာ.. တမိုင်လောက်ပါသွားပြီး.. အတင်းပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်..
ညဆို.. လူမမိလောက်ဖူး.. ငါကွ..ပေါ့..။
ပိုက်ဆံမပေးပဲ.. တက်မောင်းလို့တဲ့လေ..။ ဒဏ်ကြေး ၇ဝဆင့်..။
အဲဒီအပေါ်ကဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ အကောင့်ဖွင့်ရင်.. ဒဏ်ကြေးကိုပေးစရာမလိုဘူး..
အယ်လ်အေမှာ..မီးပွိုင့်နီဖြတ်ရင်.. ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီး..အိမ်ဓါတ်ပုံပို့.. ဒဏ်ကြေးတောင်းတဲ့စနစ်ရှိဖူးတယ်..
ကုမ္ပဏီသူဌေးတယောက်.. မိန်းမတယောက်နဲ့ကားမောင်းလာတဲ့ပုံကြီင်္း အိမ်ကိုဓါတ်ပုံပို့လိုက်တာ.. (အော်ရီဂျင်နယ်)မိန်းမတွေ့ပြီး.. လင်မယားကွဲရော..
အဲဒါ.. အဲဒီသူဌေးက.. မြိုတော်မြူနီစပယ်ကိုတရားစွဲတာရှိဖူးတယ်..
ကညန မှာရှိတဲ့ ပိုင်ရှင်၊ လိပ်စာနဲ့က အခုလက်ရှိတကယ်ပိုင်နေတဲ့လူဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာ…
အိုဘယ့်… ကားနံပါတ်စနစ်… လိုင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး…
ရန်ကုန်မှာ ကားမောင်းရတာစိတ်ပျက်လွန်းလို့ တွေးမိတွေးရာရေးမိတာပါ…
Yellow Box မှာ ကိုယ်ကကားရပ်ထားပေးရင်တောင် နောက်ကကားက ဟွန်းတီးတာခံရတယ်…
စိတ်မရှည်လို့ကျော်တက်ပြန်ရင်လဲ မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုကြည့်… ဂြိုဟ်သားလိုကြည့်လိုကြည့်…
အိုက်ဒီထက်ကံဆိုးတာက ကားမမောင်းတတ်ဘူးလားလို့ အမေးခံခဲ့ရတာပဲ…
ဒီမနက်တင်… ဂျပန်သံရုံးရှေ့နားမှာ တစ်ခါ…
မနက်တိုင်းလဲ အဲ့ Yellow Box မှာ ရပ်ပေးမိတုန်းပဲ… ချဉ်ပါတယ်အေ… (ခွက်ဒစ်တူ=ဂီစိန်မ)
ပြီးရင် လွှတ်တော်မှာတင်ပြမယ်… အိုကေရင် အစ်ကိုနဲ့ကျွန်တော် အလုပ်တွေထွက်ပြီး ကုမ္ပဏီထောင်မယ်လေ…
ကိုယ်တို့မြန်မာလူမျိုးက ပိုက်ဆံထိမှ စည်းကမ်းလိုက်နာကြတာ…
ဂုဏ်သိက္ခာတို့… နိုင်ငံကြီးသားတို့ဆိုတာထက်… ဒဏ်ငွေကို ပိုကြောက်ကြတာဆိုတော့ အဲလိုပဲလုပ်ရမယ်…
လူကူးမျဉ်းကြားကနေမကူးဘဲ… လမ်းလည်ခေါင်မှာ အတွဲလိုက်ကြီး မျက်စိမှိတ်ဖြတ်ပြေးလို့
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်နေတာတွေ… အမှုပွေနေရတာတွေနဲ့စာရင် ဒဏ်ငွေ ၅သိန်းဆိုတာ နဲနဲလေးပါ…
လူ့အသက်တွေအတွက်… မှုလောက်မယ့်… ဒဏ်ငွေပေါ့လေ…
ဂီဂီထပ်ပြောထားတဲ့ နည်းပညာကိစ္စကတော့ အချိန်အတော်ယူရမယ်လေ…
သွင်းလာသမျှကားတွေအကုန်လုံးက ဂျပန်ကျ… ဂျပန်လမ်းစနစ်နဲ့အဆင်ပြေပေမယ့်…
အဲဒီတော့ လောလောဆယ် ဖွင့်ချင်တိုင်းဖွင့် ပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်လုပ်နေတဲ့ မီးပွိုင့်စနစ်ကို စင်ထရယ်လိုက်(စ) လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးကြိုးစားရဦးမယ်…
ဒါလေးလဲ ဂရုပြုစေချင်တယ်… တော်ကြာ မော်ဒယ်မြင့်ကားမစီးရဘဲ… ကားအပြာကြီးအိမ်ရှေ့လာထိုးစိုက်နေဦးမယ်…
နောက်တစ်ခုက အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ရဲတွေပဲပြန်လည်ခန့်မှာဗျ…
ကိုတိုက်က လမ်းလည်ခေါင်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရင်… ကားတွေက ကိုတိုက်ကိုမမြင်မှာစိုးလို့…
ကန်ထရိုက်ယူလို့ရချင်သား… စစ်တပ်ကိုပြောတာပါ… ခိခိ
စစ်တပ်ကိုကန်ထရိုက်ယူပြီးတော့ လေတပ်က ဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့ မြို့တွေကို ခေါက်တိုဆွဲ…
ရေတပ်သင်္ဘောတွေနဲ့ ကမ်းရိုးတန်းရှပ်ပြေးတွေအစားထိုး… ဟိဟိ…
အခုအချိန်မှာ လူတိုင်းကရှိပြီးသားလမ်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုပဲ ဂရုမစိုက်တော့တာပါကွယ်…
ကားဈေးလျော့လာရင်… ဒဏ်ကြေးတင်ပေးရမယ်… ဒါမှ Balance ဖြစ်မှာ…
ကီလိုမာလကာလိုဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားနဲ့ ဝီစကီကြိုက်တဲ့ဇူးလူးမလေး ချောင်းဟန့်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
တူမောင်ဂျီး ဖက်ဖက်ကပ်ရေ ..
အလွန်ကြီးတဲ့ အကြံပါဘဲ ……။
ကြားဖူးဒါတော့ … ပုပ်ဂလိက လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးလု့ိ ရတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုလား ချိသတဲ့တော် ။ တချို့ လုပ်ငန်းတွေက … ကန်ထရိုက်ပေးရို့ မရဘူးတဲ့အေ … ။ ဂလိုဂျောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ယာဉ်စီးကမ်း လမ်းစီးကမ်း မချိတာကတော့ …. အိုးပဲ့နဲ့ စလောင်းရွဲ့တွေများနေတာကြောင့်ရယ် …. :harr:
ချဗျာ .. ကျာဒလားလို့ …
ဘူ မဝင်ဝင် ကျုပ် ချယ်ယာ ပါဂျင်ဒယ် ..
နှစ်နှစ် အတွင်း သဋ္ဌိန်းဖြစ်မယ့် လမ်းဘဲ ..
အိုက်ဒီယာလည်း လန်းဒယ် ..
ယာဉ်ထိန်းရဲ ဆိုတာလည်း လုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီး အဖတ်ဆည်မရသလောက်နီးပါးဖြစ်နေတဲ့
အားလုံးကို ပြုပြင်ဖို့ အစက စ မှ ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
အဲဒီစကားက အာဏာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေ
ဗွီအိုင်ပီလက်ရှိတွေနဲ့ ဗွီအိုင်ပီလက်ဟောင်းတွေ အားလုံး
တစ်မျိုးတည်းသော ဥပဒေအောက်မှာ တစ်ညီတည်းရှိတာကို ဆိုလိုတာပါပဲ…။
ဒီလိုပဲ တစ်ဖက်ကလဲ –
ဆင်းရဲလို့ စားစရာမရှိလို့ နေစရာမရှိလို့
မရှောင်နိုင်လို့ မလွှဲနိုင်လို့ …လို့ …လို့
စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေကိုအရင်းတည်ပြီး
ဥပဒေကို ကျော်လွန်ချိုးဖေါက်ခွင့် မရှိတာကို ဆိုလိုတာပါပဲ…။
ဒီလူတွေထဲက စည်းကမ်းရှိသူတွေ အလုံအလောက်ပေါ်ထွက်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး…
အနည်းဆုံး နောက် နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်အတွင်းပေါ့ ….
(လမ်းတံတား ဖြတ်သန်းခတွေ ကန်ထရိုက်ယူသလိုမျိုး) :harr:
ခုရက်ထဲ ပဒုမ္မာရေးတဲ့ စူပါမန်းတွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး သတိထားကြည့်မိလို့ပဲလား မသိဘူး။
စည်းကမ်းမဲ့ ကားမောင်းတာ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းမလိုက်နာတာတွေ နည်းသွားသလိုပဲ။
လမ်းတွေမှာလည်း ကားတွေ ပိတ်ဆို့နေတာ၊ ကြပ်သိပ်နေတာတွေလည်း သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။
ဟိုးအရင်ကဆိုရင် မနက်ပိုင်း သီရိမင်္ဂလာဈေးရှေ့မှာ ဒိုင်နာကားတွေ၊ ဘတ်စကားတွေ၊ ကုန်ကားတွေ ပိတ်ပြီး လုံးဝသွားမရပဲ အေးရိပ်မွန်နဲ့ မြကန်သာအိမ်ရာတွေဘက်က လှည့်သွားရတာ။
ထူးထူးခြားခြား ခုရက်ထဲမှာတော့ လမ်းပိတ်ဆို့မနေပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူး သွားလို့ရလို့ အံ့ဩလို့
လမ်းရှင်းနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပိုစ့်တင်မလို့ ကားသွားရင်းမို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ အဆင်မပြေတာနဲ့ပဲ မတင်ရသေးတာ။
တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည်… လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကိုတောင် ဂုဏ်ပြုချင်နေတာ။ :hee:
ခေါင်းထဲမှာ အတွေးစလေး လက်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် မာမားရေ…
စီဂျေတွေ လုပ်နိုင်တာ တခုရှိတယ်။ လစာငွေ နည်းပါးပြီး နေပူမိုးရွာမရှောင် အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ပြောင်မြောက်စွာစွမ်းဆောင်မှုတွေ ရှိလာ လုပ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ရေးနေတဲ့ မီဒီယာမှာ ရေးသားဖော်ပြဂုဏ်ပြုမယ်။
သူတို့အကြောင်း အင်တာဗျူးမယ်။ လာဘ်မစားကြနဲ့ လူထုက ရံပုံငွေ မျိုး တည်ထောင်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်။
တလအတွက် အကောင်းဆုံးသော ယာဉ်ထိန်းရဲ ဆိုတာမျိုး ဆုတွေ ပေးမယ်။ ပင်စင်နဲ့ အိုမင်းမစွမ်းတော့တဲ့
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေအတွက် ဖူလုံရေး ကို လူတွေ အဝဲယားနက်စ် ရအောင် စာတွေရေးမယ် လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ် …စသည် စသည်..။
ကိုယ်တွေတောင် နေပူထဲ ၁ဝမိနစ်လောက် ကားပိတ်ရင် စိတ်ညစ်သေးတာ အဲသည့် နေပူထဲ ခေါင်း-ခါး-ခြေ-လက်
အကုန် လှုပ်ရှား အလုပ်လုပ် နေရသူတွေအတွက် တခုခု စဉ်းစားပေးခြင်းမျိုးပေါ့။
P.S မမေ့မဖြစ်က တဖက်ကလည်း မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ့ရင် ရေးမယ် တိုင်မယ် ကန့်ကွက်မယ် ရှုံ့ချမယ်ပေါ့ဗျာ…။
အကြံကောင်းရင်တချက် ကံကောင်းရင်တသက်တဲ့။ အကြံတော့ကောင်းပါတယ်ဖက်ဖက်ကက်ရေ။ ကံကောင်းရင်တော့ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညီးကန်ထရိုက်ရအောင် အရင်ယူလိုက်လေ။ နာရှယ်ယာထဲ့ပါ့မယ်။ ပီးရင်နာ့ကိုတော့ဖမ်းနဲ့အေ။
ဒီပိုစ့် ကြီးဖတ်ပြီး . . ဘာမြင်လဲ ဆိုတော့ . . စာရေးသူ ရဲ့ အတ္တ ကြီးပြေးမြင်တာဗျ . . . .။
” ရန်ကုန်မှာ ကားမောင်းရတာစိတ်ပျက်လွန်းလို့ ”
တဲ့ အသာလုပ်ပါ . . ကိုရီးဖက်ကပ် ရယ် . . . . . လူသတ်တာ က ၆ နှစ် အနှေးယာဉ် လမ်းပြောင်းပြန် စီးက ၁ဝ နှစ်ဆိုတော့ . . ဟိုပုံပြင်ထဲက သစ်ခုတ်သမားလို . . ဓားတို နဲ့ လိုက်ပိုင်း နေမှ . . . .
အဲ့ဒီတော့ . ……………………..
မော်တော်ပီကေ တိုင်း . . . . သိုင်းသင်ထားရန် ဆိုတာလေး . . . .
အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ . .
min khant kyaw says:
ဝန်ထမ်းလျောက်လွာခေါ်နေပြီလားဗျိုး။လျောက်လွှာတစောင်ဘယ်လောက်လဲ? 15 သိန်းပဲလား?
ကိုယ်ကတော့ စည်ပင်သာယာကို ကန်ထရိုက်ဆွဲချင်နေတာ ….။ ဈေးရယ် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခွင့်ရင် ပုံဆွဲခရယ် ….။ သားသတ်လိုင်စင်ရယ်….. ဟီ ဟိ ရှယ်ပဲ ဘယ်သူပါမလဲ